BLACK ORCHID: SHARAXAADDA, NOOCYADA, SIFOOYINKA BEERITAANKA IYO DARYEELKA - DHIRTA GUDAHA
Noocyada caanka ah ee orchids madow, gaar ahaan beerashada ubax qalaad
Madow orchid neefsashadu iyo neefsashada. Si aad u aragto waa xaalad dhif ah, taas oo u muuqata malaayiin taageerayaal ah ubaxa adduunka ubaxa riyo ah halkii ay xaqiiqo ahaan lahayd. Magaceeda maanta waxaa la siiyaa dharka cadarka dumarka, riwaayadaha iyo filimada. Ubax jilicsan, oo ku dhex qarsoon qarsoodiga iyo xikmadda, laakiin isla markaa, waxay u muuqataa inay si qurux badan u soo jiidanayso dhammaystirkeeda, nimcada iyo xarrago sharaf leh. Kuwo badan baa naftooda ku cadaadiya jiritaanka jiritaanka, halka kuwa isku kalsoon ee kalsooni ku qabsaday Olympus. Ma jiraan runtii madow orchid - isku day inaad muujiso qarsoodiga ah ee ubaxa qarsoodi ah.
Ma taqaanaa? Muddo dheerba, beeralayda ubaxa ah ayaa la yaabay, laga bilaabo halkii wargeysyo ku saabsan saadkan gaarka ah ee faafa. Ereyada waxaa loo aanaynayaa ubax ka soo jeeda jeexjeexo jacayl aan qarsoodi lahayn iyo xittaa laga bilaabo sixirka madow. Xeerka Ecuadorian wuxuu rumaysan yahay in uu yahay orchid madow oo wuxuu u dhawray sidii hees aan qiimo lahayn.
Black Orchid - Myth ama Reality?
Rationalists waxay aaminsan yihiin in madow ee adduunka dhirta uusan jirin, sababtoo ah ma jiro suufin hiddesid, taas oo mas'uul ka ah hooska madow oo si fiican. Sidaa awgeed, jiritaanka ubaxa dabiiciga ahi waa wax qurux badan, sawir qurux badan lehna muuqaalkiisa ayaa ah midabka mashiinka kombiyuutarka.
Si kastaba ha noqotee, jacaylka ayaa ku adkeysanaya soo horjeeda. Intaa waxaa dheer, in ay taageeraan xukunkooda waxay ku calaamadanyihiin xaqiiqda ah in faafida orchid madow ee Europe ay ka timid qaar ka mid ah George Cranlaite. Kootarabist ayaa la sheegay in lagu safrayo xeebaha Koonfurta America khatarta uu noloshiisa ku helay dhir aan dhif ahayn oo u sheegay dunida oo dhan. Laakiin ma jiraan wax caddayn ah oo caddayn ah.
Cilmi-baadhayaashu waxay sharxi karaan dhacdooyinka ubax leh kala duwanaansho kala duwan oo maroon ah iyo midab buluug madow. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad si dhow u fiirsato, waxaa laga heli karaa midab madow. Sidaa darteed, waxaa suuragal ah in orchid madow ku nool yihiin kaymaha, qoyan qoyan ee xeebaha meel dunida ka mid ah, laakiin kalluumeysatadu waxay sameeyeen taageeradooda, iyagoo ku faraxsan beeralayda ubax beeraha leh bikrada cusub. Botanistayaasha Californian, kuwaas oo maareeyay oo kaliya in ay soo saaraan noocyada orchid madow, laakiin sidoo kale in ay patent, waxay gaareen guul gaar ah. Sida iska cad, waxaa jira ubax mucjiso ah, si aad u hesho, uma baahnid inaad ku wareegto jasiirada caanka ah ee Maraykanka, waxaad kaliya u leedahay inaad tagto dukaanka ubaxa.
Qeexida noocyada orchid madow
Madow Orchid ... Maxay ku dhex jirtaa qalabka malaayiinka ah oo ay kala soocaan dhammaan noocyada orchids ee adduunka? Ka dib oo dhan, kala duwan kasta waxa uu leeyahay wax la yaab leh taageerayaasha quruxda ubaxa.
Ubax aan qarsoodi ah ayaa soo jiidata carfis jilicsan. Ubaxyo madow oo orchid ah, oo ciyaaraya waxyaabo kala duwan oo kala duwan, xiiso leh aruurinta. Fasal kasta waxaa jira wax gaar ah.
Maanta saynisyahanadu waxay ku faanaan yihiin daraasado cusub oo cusub. Tixgeli sifooyinka ugu quruxda badan oo raadsada.
Ma taqaanaa? Orchids ayaa ku baahsan dunida oo idil. Waxaa laga heli karaa oo kaliya kulaylaha kulul, laakiin xitaa banaanka goobada Arctic. Laakiin dhammaan noocyada kala duwan ee extravaganza isku mid ah midabadaasi waxay ku urursan yihiin aagga kulaylaha. Oo waxay ku koraan kaynaha, iyo savannas, iyo buuraha dusha sare ee 4.5 kun mitir ka sarraysa heerka badda.
Noocyada ugu liidata waxay ku jiraan dhammaan dabeecadihii hore ee duurka. Tijaabooyinkiisa waxaa laga helay Brazilian Espiritu Santo oo ku taal xeebta Atlantic ee xuddunta roobabka ee ugu sarreeya 700 - 3500 m oo ka sarreysa heerka badda.
Calaamadaha calaamadaha waa caato gaaban, ubax yaryar iyo ur la'aanta. Maadada iyo caleenta waxay u koraan ugu badnaan 25 ilaa 30 cm, ubaxuna gaari karo dhexroor qiyaastii 1.5 illaa 2 cm. Midabka madow ama orkut yar ee iftiinka liita wuxuu u muuqdaa madow, laakiin haddii aad si dhow u fiirsato, waxaad arki kartaa midab madow. By habka, oo ka mid ah nooc kasta oo orchids madow, hooska this waa ugu caansan. Waxay leedahay afar tufaax, oo muujinaya, waxay u eg yihiin qaabka laleh. Inflorescences waxay ku taallaa qaybta hoose. Maaddaama peduncigu uu qiyaastii 3-5 cm dheer yahay, waxay u muuqataa in maxillaries ay si toos ah uga muuqdaan nalalka. Xaaladaha qolka, geedka ayaa doorbida hawada qoyan, dhexdhexaad ah oo qoyan. Dabeecadda taxaddar leh waxay u baahan tahay qayb xag-jir ah, maaddaama waxqabadyo aan xirfad lahayn ay ku hanjabeen inay waxyeelo u geystaan ​​kelyaha, kiciyaashooda. Sidoo kale, ubaxa ma cafin doonaa slurry slurry in dheri ah. Noocyo isku mid ah lagu beeray ayaa lagu taliyey in lagu ridayo baaquli yar.
Fredclarkeara Ka dib markii mugdi madow Pearl
Noocyada ayaa ah natiijada isku dhafka is-goysyada ee isku dhafan ee catasetum, Mormode, iyo clavesia. Orchid ah baaluq ayaa ku tuura afar walbood, midkiiba 10 ilaa 15 oo ubax ah mid kasta oo leh dhexroor illaa 5 cm Cajuusta madow oo leh caraf udgoon oo macaan ah ayaa u eg qaabka tulooyinka, burushna waxaa lagu dhajiyaa peduncle. Caleemaha waa casaan leh, cagaar dhalaalaya, u dhinta jiilaalka.
Ka dib markii kulaylka, xididdada wada jir ah leh stem soo saaro nooca pseudobulb, kaas oo ah dhalatada dhuuban. Waxay leedahay kaydka nafaqada. Marka biomasska cagaaran uu soo afjaro korniinka, ubaxyada ayaa la sameeyaa. Sida caadiga ah, muddadani waxay dhacdaa Oktoobar - Noofembar. Khafiifinta tufaaxa waxay soconaysaa illaa 8 usbuuc.Tilmaamaha caadiga ah ee kala duwanaanta waa xaddiga ubaxyada. Daryeelka ayaa doorbidaya heerkul diirran oo dhexdhexaad ah iyo iftiin dhalaalaya. Marka aad joogtid guriga, kobciyo dhibaato la'aan. Waxaa muhiim ah in aanad ku dhaafin waraabinta iyo bacarimid muddada mudidda yar ee caleenta. Waqtigaa, dhirta waa ka wanaagsan tahay in aan dhib lahayn.
Waa muhiim! Orchids waxay u baahanyihiin in la beddelo 3 illaa 4 sanadood, mararka qaarkood waxay ku filan tahay in ay si fudud u beddesho lakabka sare ee jilifka dheriga.
Noocyada kala duwan ee orchids madow, kuwan waxaa lagu kala soocaa tones darkestest dark. Blooming inflorescences monophonic, badanaa mugdi madow, on petallals xididdada madow muuqaal yihiin. Marka qorraxda daboolo waxaa ku yaala ebb. Qaababka ubaxa waxay u eg yihiin kabo, oo ka soo duulay saddex talefoon. Zev khafiif ah oo u gudubta si siman u gudubka casaanka ah, dhexe waa mid hurdi ah. Daryeelka ubaxa waa wax ka duwan kuwa kale ee papiopedilums. Geedku wuxuu u baahan yahay substrate jilac iyo weel hufan, hawo qoyan oo soo noqnoqda, waraabinta dharka ah iyo dharka sare.
Orchid madow mugdi ah ee shimmers qorraxda shimmer. On peduncle dheer, aan ka badnayn laba ubax kabo waaweyn oo muuqaal isku mid ah. Caleemuhu waa kuwo yaryar, oo aad u sarreeya, dhalaalaya, oo ka soo horjeeda asalka jimicsiga madow. Wixii horumarin buuxda ee dheriga heerkulka qolka waa in uu ahaado 18-22 digrii. Sida noocyada kala duwan ee papiopedilums, kala duwanaanta noocaan ah waxay u baahan tahay ciidda dabacsan oo wanaagsan.
Orchid Black ee phalaenopsis jaadka ayaa helay magaca noocyada kala duwan sababtoo ah tufaax madow oo u eg baalal dhicin. Qaybo daaqsin ah oo qiiro leh ayaa leh khudrad qani ah oo khamri ah. Ku nadiifi maqaarka caddaanka ah ee bishimaha ku dar raaxo leh ubax. Under shuruudaha wanaagsan, lakabka yaryar ayaa ka muuqda geesaha tufaaxa. Caleemaha waa qoryaan, casiir leh, cagaar madow. Peduncle muddo dheer. Waa mid caan ku ah in dhammaan ubaxyada hoose ee mugdi madoobaaday, iyo sare ee ay ku yaalliin - quruxdooda ay tayadooda.
Noocyada soo koraya ee orchids madow
Daryeelka orchid madow kama duwan yahiin noocyada kale.
Sida orchids dhan, ubaxa u baahan yahay:
meel dabacsan oo aan lahayn farsamooyin iyo raajo toos ah oo ultraviolet ah;
substrate iftiin (waxaa lagu diyaarin karaa qaybo isku mid ah oo ah vermiculite, jilif geed iyo dhul beer);
waraabinta biyo badan oo xagaaga ah iyo dhexdhexaad ah xilliga jiilaalka (geedka ma jecla xad-dhaaf ah qoyaanka);
qoyaan maalinle ah biyo diirran;
quudinta waqtigeeda leh Bacriminta gaarka ah ee loogu talagalay orchids;
nasasho ku filan inta lagu jiro isbeddelka iyo nidaamka heerkulka oo aan ka hooseeyn 14 darajo.
Qolka orchid qolka, iyada oo aan loo eegin nidaamka midabka ee tufaaxa, wuxuu u baahan yahay jacayl iyo daryeel. Oo haddii uu helo, wuxuu si buuxda uga mahad celin doonaa malaha ubaxa.